त्रिपाल खरिद प्रकरणमा नाम जोडिनु मिथ्या आरोप हुन् : बाह्रविसे नगरपालिका मेयर | शुभयुग
त्रिपाल खरिद प्रकरणमा नाम जोडिनु मिथ्या आरोप हुन् : बाह्रविसे नगरपालिका मेयर
शुभयुग संवाददाताप्रकाशित मिति: २०७७ आश्विन २, शुक्रबार (१ साल अघि)
७२५ पाठक संख्या
२ असोज काठमाण्डौं – असोज, सिन्धुपाल्चोक । सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको बाह्रविसे नगरपालिका विगत केहि महिना अघि देखि वाढीपहिरो अर्थात दैविक प्रकोपले थला परेको छ । यसै दैविक प्रकोपको विषयलाई लिएर विभिन्न सामाजिक सञ्जाल र मिडियामा सकारात्मक र नकरात्मक समाचारहरु बाहिरिए । यसै सन्दर्भमा पछिल्लो समय त्रिपाल काण्ड, बालुवा काण्ड लगाएत अन्य आरोप प्रत्यारोपको विषयमा बाह्रविसे नगरपालिकाका मेयर निम फुन्जो शेर्पा संग शुभयुग सहकर्मी जीवन शर्माले गर्नुभएको टेलिफोन संवाद
मेयर साप, शुभयुग मिडियामा यहाँलाई स्वागत छ ।
बाह्रविसे नगरपालिकाका जम्बु बाढि पहिरो पिडितले राहत पाएनन् भन्ने छ नी ?
– राहत कस्ले पाएनन् भन्नुस !
यो विषयमा के हो भनि म भर्खरै त्यस स्थलको अवलोकन गरि आएको हूँ । घट्ना स्थलमा केहि पत्रकार पनि थिए । पत्रकारले स्थानियलाई तपाई पिडित हो ? कहाँ बस्नुहुन्छ ? भनेर सेध्दा हामी त घरमै बसेका छौं भन्छन् । तपाइको घर वरिपरि पहिरो आएको छ ? छैन भन्छन् । घर पनि ढलान छ भन्छन्, त्रिपाल पाएन भन्छन्, राहात पाएन भन्छन्, मुख्य समस्या त्यो हो । नत्र भने तपाईको त्यहाँ व्यवस्थापन समिति बनाएको छ । वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ , उपमेयरको संयोजकत्वमा व्यवस्थापन समिति बनाइएको छ ।
त्यहाँ बत्ती, पानी, ट्वाइलेट छैनकी! दाल, चामल, तेल लगायत ओड्ने-ओछ्याउने सबै विषयको व्यवस्था गरिएको छ ।
यसका विषयमा टिका टिप्पणी धेरै आए प्रष्ट पारिदिनुहोस् न ?
– यस घटनालाई लिएर हामीले व्यवस्थापन समिति गठन गरेका छौ । त्यस पछि व्यवस्थापन समितिद्वारा अति आवश्यक वस्तु जस्तै बत्ती, पानी, दाल, चामल, नुन, तेल र त्रिपालको व्यवस्थापन गरिरहेको छ कुनै कमि भएको छैन र हुन पनि दिन्न यो मेरो जिम्मेवारी हो ।
हामीले कार्य विभाजन गरि वडा अध्यक्ष, उपमेयर, स्थानिय युवाशक्ति परिचालन गरेका छौं, त्यस स्थानमा अत्यावश्यक कुराहरु माग गर्ने र नगरपालिकाले कार्यसमितिको माग पुरा गर्ने, कति क्वान्टिटी, क्वालिटीमा सबै नगरपालिकाले कुनै कमि कमजोरी हुन दिने छैन । हामी नगरपालिकाले राहत किन्न पनि पछि परेका छैन । सिरिप व्यवस्थापन गरे पुग्छ । सबै केन्द्र र संघ संस्थाले सहयोग गर्नुभएको राहत हामीसँग जाम भएर बसेको छ ।
जुन घटना स्थलमा स्थानियबासीले घट्ना घट्न सक्छ, निरिक्षण टोली ल्याएर निरिक्षण गर्नु भनेका रहेछन् नि, किन, नगरपालिकाबाट निरिक्षण गराइएन नगरबासीलाई स्पष्ट पारिदिनुस् न?
– जिवन जी तपाई सुन्नुस् न, म एकदम स्पष्ट पार्न चाहान्छु नगरबासीहरुलाई, हामीले जुन यो भन्दा अगाडी जम्वो र अन्य स्थानका बस्ती स्थानान्तरण गर्ने क्रममा थियौं हामीले त्यहाँ के देखेका थियौं भन्दा माथि पुरै चट्टान जुन फुटेकै छैन । तल पुरै खेत, सिन्धुपाल्चोक बाह्रविसे नगरपालिकाको सबैभन्दा राम्रो खेती योग्य जग्गा हो । धान उत्पादन हुने ठाउँ नै यहि हो । नगरपालिकाले पुरै अवलोकन गर्याे तर के भयो भने तल बिचमा केहि बस्ती रहेछ । राती अविरल वर्षा भएर एक ठाउँ फुट्ने बित्तिकै पुरै सखाप भयो । अविरल वर्षातको कारणले यो घटना घटेको हो । केहि स्थानिय यस्ता छन् की, जुन कुरा राजनितिक पात्र हुन् । केहि युवा यस्ता छन् हाम्रो कामको पुर्ण विरोध र हल्ला फैलाउन पछाडी लागेका छन् । यस्ता त स्थानिय छन् । जस्ले नगर प्रमुख निम फुन्जो शेर्पाको गाडी १४०८ को फोटो सहित राखेर समाचार बनाउछन् । तपाई पत्याउनुहुन्छ, त्यस्ताको के विश्वास गर्ने तपाईनै भन्नुस त ।
बाह्रविसे नगरपालिकाले खरिद गरेको त्रिपाल प्रकरणमा अनियमितता भयो भन्ने समाचार विभिन्न मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा बाहिरियो नी, यस विषयमा तपाई के भन्नुहुन्छ ?
– त्रिपालको विषयमा सम्पुर्ण बाह्रविसे नगरबासीलाई यो विश्वास दिलाउन चाहान्छु । त्रिपाल किन्ने ठाउँमा कर्मचारीले अनियमितता गरेको खबर पाउने वित्तिकै बाह्रविसे बजारमा केहि स्थानिय युवाहरु गएका थिए । तिनै युवाद्वारा त्रिपालमा अनियमितता गर्याे, भनेर समाचार बनाए । त्यस लगत्तै म नेकपा पुर्व एमालेबाट जितेको हुँ । मेरो गलत प्रचार गर्नको निमित्त पनि यो समाचार बाहिरिएको हुनसक्छ । स्थानिय पत्रकार, वकिल, पुलिस प्रशासन, त्रिपाल किन्ने मान्छे, प्रशासनिक अधिकृत राखेर पुरै छानविन् गर्याै । सो छानविन् गर्दा त्यस्तो कुनै पनि अनियमितता भएको पाइएन । यस काण्डलाई केहि व्यक्तिद्वारा गलत प्रचार गरियो । र स्थानियलाई यस घटना प्रति कुनै अनियमितता नभएको स्पष्ट पार्न चाहान्छु ।
कारोना भाइरस (कोभिड(१९)का कारण नेपालमा बाह्रविसे नगरपालिका वडा नं ९ मा एक महिलाको मृत्यू भयो । त्यति बेला पुरै नगरपालिका शोकमा डुब्यो र त्रसित थियो । नेविसंका केहि साथिहरुले नारा जुलुस गर्नुभयो । के, त्यो शोकको घडीमा नारा जुलुस गर्ने समय थियो त ? मलाई फसाउनको निमित्त विभिन्न कृयाकलाप सम्म भए । जो मेरो साथमा २१ मिनेटको भिडियो पनि छ । यदि आवश्यक परेमा उक्त भिडियो जो कसैलाई पनि उपलब्ध गराउन सक्छु । मेरो काममा केहि वाधक शक्तिहरुपनि छन् । तर म मेरो काममा निर्धक्क छु ।
वालुवा प्रकरणले निकै चर्चा पाएको छ, अवैद्य वालुवा लिलामी विक्रि प्रकृया सुरु भयो भन्ने समाचार मिडियामा आएको छ नी ? यस बारे नगर प्रमुखको हिसाबले तपाई के भन्नुहुन्छ ?
– यो बालुवा भन्ने कुरा चरम रुपमा धेरै पहिले देखि नै चल्दै आएको विषय हो । हामीले त निर्देशन मात्र दिने हो । हामीले निर्देशन पनि दिइसकेका छौं । यसको कार्यन्वयन गर्ने काम प्रशासनको हो । बालुवा काण्ड चाहीँ किन आएको हो भन्दा, हामी सरकार पक्षमा छौं । जिल्ला सरकार पक्षमा छ । नगर सरकार पक्षमा छ । पालिका सरकार पक्षमा छ । प्रदेश र केन्द्र पनि सरकारको पक्षमा छ । त्यसैले विरोध गर्नु स्वभाविक हो । तर बालुवाको तस्करी गर्ने सबैभन्दा बढी सत्ता पक्ष भन्दा प्रतिपक्ष तस्करीमा आवद्ध बढि छन् । बालुवा तस्करमा आवद्ध हुने एक एक रेकर्ड म संग छ । दिन दनै बालुवाको बार्गेनिङ्ग गरेका प्रमाणहरु पनि छन् ।
अन्तमाः बाह्रविसे नगरपालिकाका नगरप्रमुख प्रति लगाइएको दाग र गलत प्रचार प्रति तपाई नगरबासीलाई के सन्देश दिन चाहानु हुन्छ ?
– म नगर प्रमुखको हैसियतले सम्पुर्ण बाह्रविसे नगरबासीलाई के अनुरोध गर्न चाहान्छु भने, हामी सबै अनुसाशित हौ, सब्य नागरिक बनौं, सत्य बोलौं । जुन सरकारले कोभिड(१९ मा खुकुलो गरेको छ, हामी सबै नागरिक सचेत हुनु जरुरी छ । मास्क लगाउन, साबुन(पानीले मिचिमिचि हात धुन, भिडभाडमा जाँदा सामाजिक दुरी कायम गरिदिनुहुन अनुरोध गर्दछु । राजनितिक दलका साथिहरुलाई पनि म के अनुरोध गर्न चाहान्छु भने, यस विसंम घडीमा एक आपसमा सदभाव, भाइचारा र आपसमा मिलेर कोभिड(१९ र दैविक प्रकोपको सामना गर्न आग्रह गर्न चाहान्छु । विसंम् परिस्थितिमा पक्ष(विपक्षको आरोप(प्रत्यारोप लगाउनु आफैंमा दुखको विषय हुनाले सम्पुर्ण हामी नगरबासी एक हौ भन्न चाहान्छु । यस बाह्रविसे नगरपालिकालाई दैविक प्रकोपमा सहयोग गर्नुहुने केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानिय सरकार, विभिन्न संघ(संस्था र देश(विदेशमा हुनुहुने सम्पुर्ण नेपाली प्रति मेरो नमन छ ।
मेयर ज्यु, समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै(धेरै धन्यवाद ।
– हस जीवन जी, तपाइको शुभयुग मिडियालाई पनि मेरो नगरपालिकामा उठेका प्रश्न र नगरबासी प्रति मेरो स्पष्ट धारणा राख्ने मौका दिनुभएकोमा धन्यवाद ।
सिटमा दोस्रो देखिए पनि समग्रमा एमालेको जनमत बढेको छ : नेम्बाङ
अतिकम विकसितबाट स्तरोन्नतिपश्चात् नेपाल थप सक्रिय बन्न सक्नुपर्छ : अमृत राई
अव उपचार नै नपाई ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था आँउदैन : स्वास्थ्यमन्त्री खतिवडा